Ruushka oo rajeenaya in uu soo afjaro howlgalka Ukraine – Radio Muqdisho
Afhayeenka Kremliin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Moscow ay rajeynayaan in hawlgalka milatariga Ruushka ee ka socda Ukraine la soo afjarayo maalmaha soo socda ana mustaqbalka dhow.
Afhayeenka ayaa intaa raaciyay ciidamada Ruushka waxay gaari doona hadafka ay ka leeyihiin Ukraine ama Moscow iyo Kiev waxay gaari doonaan heshiis wax ku ool ah mustaqbalka dhow.
Waxa uu si gaar ah u sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay fal-dambiyeedkii ka dhacay deegaanka Donbas,isagoo dhinaca kale waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan in ciidamada Raashiya ay geysteen dilal wadareedyo.
Afhayeenka Kremliin-ka ayaa yiri, “Ukraine waxay ahayd xarunta ka-hortagga Ruushka tan iyo 2014,isaga oo intaa ku daray in NATO ay aad uga fog tahay inay sidoo kale noqoto koox militari oo difaac ah.
Ruushka ayaa hadda ka dalbaday Ukraine inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo inay tahay dal dhexdhexaad ah oo aan waligiis ku biiri doonin ciidamada NATO ee uu hoggaamiyo Maraykanku.
Wasiirka Cadaaladda XFS oo booqday xabsiga Beydhabo